Honda – Page2– AutoMyanmar
2018 Honda Odyssey နဲ့ CR-V တို့ဟာ U.S News ကသတ်မှတ်တဲ့ “2018 Best Cars for Families” စာရင်းမှာပါဝင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ SUVs and Minivans အမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး 2018 CR-V ဟာဆိုရင် Best compact SUV, 2018 Odyssey ဟာဆိုရင် Best Compact Minivan ခေါင်းစဉ်နဲ့ Best Cars for Families စာရင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့တာပါ။ U.S News ဟာ “Best Cars for Families” အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ ကားရဲ့လုံခြုံစိတ်ချမှုတုံ့ပြန်ချက်တွေ၊ ထိုင်ခုံအနေအထားတွေ၊ ပစ္စည်းထားလို့ရမယ့်နေရာအကျယ်အဝန်းတွေ၊ မိသားစုလိုက်သွားရတာအဆင်ပြေမယ့် Feature ပါဝင်မှုတွေအပြင် ပရောဖက်ရှင်နယ်တွေရေးထားတဲ့ကားနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတွေကိုပါ အကုန်တိုင်းတာမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ […]
Car & Driver Magazine ရဲ့ “2018 Editors Choice Awards” တွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ Honda မော်ဒယ်များ
Car & Driver Magazine ဟာ Editors Choice Awards ကို Crossovers/SUVs, Sedans, Hatchbacks, Hybrid and Electric Vehicles, Pick-up Trucks, Station Wagons, Coupes and Convertibles, Minivan/Vans အစရှိတဲ့ အမျိုးအစားများစွာနဲ့ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Honda ဟာ သူ့ရဲ့ မော်ဒယ် ၈ ခုနဲ့အတူ Car & Magazine ရဲ့ Editor Choice Awards တွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Sedan 2018 Honda Accord (Mid-size Sedan) 2018 Honda Civic (Compact Sedan) 2018 Honda Civic Si (Compact […]
2018 Honda Accord နဲ့ Odyssey တို့ဟာ Good Housekeeping ရဲ့ 2018 “Best New Cars” ထဲမှာပါဝင်ခဲ့ကြောင်းကို Honda မှတရားဝင်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Honda Accord ဟာ Best Sedan အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Honda Odyssey ဟာတော့ Best Minivan အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တာပါ။ Good Housekeeping အနေနဲ့ “Best New Cars” ရွေးချယ်မှုအတွက် Car and Driver နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်အသစ်ကား ရာကျော်ကို မိုင် ၃,၀၀၀ လောက်မောင်းနှင်ပြီး လမ်းတလျှောက်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့ကားရဲ့အခြေအနေတွေကို တိုင်းတာပြီးမှ “Best New Cars” စာရင်းထဲထည့်သွင်းတာပါ။ ကားရဲ့အခြေအနေတွေဆိုတာကတော့ လုံခြုံစိတ်ချရမှု၊ အရေအသွေးပိုင်း၊ ကားတွင်းဒီဇိုင်းပိုင်း၊ သက်တောင့်သက်သာရှိမှု […]
Honda model တိုင်းမှာရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ သစ်ခွပုလဲဖြူရောင် Edition!
Honda ဟာပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့က Honda model တွေအားလုံးအတွက် သစ်ခွပုလဲဖြူရောင် ရောက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Jazz, City, BR-V နဲ့ HR-V အစရှိတဲ့ model တွေရဲ့ အဖြူရောင်တောက်တောက်ကားတွေနေရာမှာ သစ်ခွပုလဲဖြူရောင် ဟာလည်းမကြာခင်မှာပဲအစားထိုးရောက်ရှိလာတော့မှာပါ။ Honda Malaysia today announced that the new premium colour, White Orchid Pearl will replace the Taffeta White colour for Jazz, City, *BR-V and *HR-V. Source :hondanews.asia သစ်ခွပုလဲဖြူရောင်ကိုတော့ Honda Malaysia ဟာ Civic CKD နဲ့ Accord model […]
Honda, New Edition
CES 2018 မှာ “Innovative” နဲ့ “SUV အဖြစ်ဆုံး” ဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ Honda!
Honda ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က Las Vegas မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ CES 2018 မှာ Clarity Sereis, CR-V တို့နဲ့ “Most Innovative Car” နဲ့ “SUV အဖြစ်ဆုံး” ဆိုပြီး Edmunds ရဲ့သတ်မှတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ “With wins in two of six categories, it is clear that pushing the boundaries of automotive innovation is in Honda’s DNA,” said Alistair Weaver, Edmunds editor-in-chief. “Both the forward-thinking Honda Clarity and class-leading […]
Awards, Edmunds, Honda